Safarkaygii Turkiga ayaan ku Islaamay- Aisha Rosalie | Berberanews.com
Home Qubanaha Safarkaygii Turkiga ayaan ku Islaamay- Aisha Rosalie
Safarkaygii Turkiga ayaan ku Islaamay- Aisha Rosalie
Aisha Rosalie, oo 24 jir ah, ayaa shaacisay sheekada nolosheeda dhawr cisho ka hor, marka laga soo tago in ay ahayd qof la nooleyd riyadii ahayd in ay Aktarad noqoto ilaa markii dambe ay diinta islaamka ka heshay Istanbul.
Waxaa saameyn ku yeeshay jawiga Masaajidka caanka ah ee Buluugga ah, sidoo kalena loo yaqaan Masaajidka Suldaan Axmed ee ku yaala magaalada Istanbul (Sultanahmet) intii ay ku gudo jirtay socdaalkeedii Turkiga ee laba sano ka hor. Gabadhan yar oo u dhalatay dalka (UK) Ingiriiska ayaa bilawday baadhitaankeeda ku aaddan diinta Islaamka, markii dambena waxay nafteeda u hurtay sidii ay kor ugu qaadi lahayd caqiidada Muslimiinta.
“Kahor intaanan muslin noqon, maan haysan wax diin ah, waxaan se’ aaminsanaa inuu jiro illaahay, waxaan xasuustaa yaraanteydii inaan had iyo jeer lahadli jiray ilaahay” ayay tidhi.
Rosalie waxay sheegtay in waalidkeed “ayna Diin haysan”, waxayna intaa ku dartay inaysan runti waligeed aqoon dad diin leh ka hor intayna qaadanin diinta Islaamka.
“Markii aan imid Turkiga, ma aannan lahayn ujeeddo ah inaan diin raadsado. Waxaan galay Google waxaanan helay in ay leeyihiin Masjid Buluug ah waxaanan ku fikiray malaha waad soo eegi kartaa ama soo hubin kartaa,” ayay tidhi.
Waxay sheegtay in ay “runtii cabsi badani haysay” maxaa yeelay “fikrad fiican kama aan heysan muslimiinta” maadaama oo xogtooda oo dhammi ay nooga timaado warbaahinta reer galbeedka.
“Taasi waxay ahayd nooca kaliya ee fikradda Islaamka ee aan qabay.”
Kahor booqashada masaajidka, waxay tagtay dukaan xaafadeed waxayna soo iibsatay xijaab, maadaama ay dooneysay in ay “ixtiraamto dadka ay u tagayso iyo goobta ay ku socoto”.
“Ma aanan dooneyn inaan qof ku xumeeyo anigoo timaheygu banaanka yaalaan. Waxaan ka fikiray in dadku iga cadhoon doono. Markaa waxaan u soo iibsaday Xijaabka kaliya inaan booqdo Masaajidka,” ayay tidhi.
Waxay sheegtay in ay gashay internetka kaddib ka baadhay waxyaabo ku saabsan diinta, ka dibna waxa ay ka heshay erayo diinta Islaamka khuseeya , laakiin wakhtigaas mayna garanayn macnahooda “Alxamdullilaah, Subxaanallaah, Allaahu Akbar”.
“Xitaa ma aanan aqoon sida loogu dhawaaqo.”
Markii aan galay Masjidka Buluugga ah, Rosalie waxa ay tidhi “waxaan qaatay Tusbax, ama kuusha tasbiixda, waxaannan bilaabay inaan akhriyo waxoogaa duco ah”.
Muddo ilaa saacad oo kale ah ayaan fadhiyay anigoo samaynaya Tasbiix. Sidoo kale waxa aan daawanaayay gudaha masjidka. Waxay ahayd meel aad u qurux badan oo nabdoon, waan rumaysan kari waayay. Waxaannan daawanayay dad ku tukanaya aaga hortayda. Qalbiga waxaa aad u buux dhaafiyay quruxda iyo nabada ka jirta gudaha masjidka cidina iguma qaylinaynin, cidna wax iiguma darsanin oo xataa in aan ka duwanahay imay dareensiin, aad ayaan u amakaagay, ayay tidhi.
Waxa ay tidhi “kolkaan ka soo baxay Masjidka ee aan u socday Hoteelka waxa aan raadiyay nuqulka Kitaabka Quraanka ah, waxaannan helay goob lagu hayo, kaddib naftayda waxa aan u sheegay in aan mid ka sii qaato, waanan qaatay isaga oo Afka Ingiriisida ku turjuman.
Isla markii ayaan qolkayga ku bilaabay in aan akhriyo. Rosalie waxa ay sheegtay in ay sidii u wadday akhriska Qur’aanka xataa markii ay ku laabatay UK, ilaa ay ka dhamaysay Kitaabka oo dhan.
Waxa ay igu qaadatay dhowr bilood aakhrintu, mudadaasna waxaan sameeyay daraasado badan oo ku saabsan diinta Islaamka, iyo sidoo kale daawashada muxaadarooyin badan. Dhowr bilood ka dib waxaan ku dhawaaqay Shahaadadayda. Alxamdullilaah waxaanan noqday Muslin. Kaasi waxa uu ahaa safarkaygii Turkiga ayay raacisay.
𝗪𝗔𝗫 𝗪𝗔𝗟𝗕𝗔 𝗡𝗢𝗟𝗢𝗦𝗛𝗔 𝗪𝗔𝗬 𝗜𝗦 𝗕𝗔𝗗𝗔𝗟𝗘𝗘𝗡
Wax walba oo noloshayda ahi way is badaleen, ayay ku adkaysatay.
Rosalie oo xustay in qoyskeedu aannu hubin go’aanka ay qaadatay ee diinta islaamka, waxay tidhi “hooyaday ayaa dhexmari jirtay internetka iyadoo raadinaysa macluumaadka muslimiinta, kaddib waannu wadaaagi jirnay.
“Waxay igu qasabtay inaan barto wax badan si aan u sameeyo nooc ka mid ah fahamka quruxda, nabadda, wax kasta oo ka dambeeya Islaamka una fahamsiiyo,” ayay tidhi Rosalie.
Rosalie waxay hoosta ka xariiqday in ay u maleyneyso in dabeecadda shaqsiyadeed ay tahay “qaabka ugu wanaagsan” ee Dacwadda, ama Islaamka qofka loogu yeedho karo ama lagu gaadhsiin karo.
“Waa sida ugu fiican ee dadka loogu soo jiido diinta. Sababtoo ah waxaan u maleynayaa in dabciyan aan ka caawiyey Hooyo inay fahanto quruxda islaamka. Inbadan ayaan lahadlay, waxaan isku dayay xushmo iyo is dhuldhig iyo inaan si deeqsinimo leh u la joogo, maxaa yeelay dhanka diintayada ahaan waa muhiim”
“Waxaan leenahay waalid. Waa inaan ilaalinaa iyaga, waa inaan u wanaagsanaano iyaga oo aan wax kasta oo wanaagsan la jeclaano” ayay tidhi Rosalie.
𝗠𝗔𝗥 𝗟𝗔𝗕𝗔𝗔𝗗 𝗔𝗬𝗔𝗔𝗡 𝗗𝗛𝗔𝗦𝗛𝗔𝗬.
Rosalie waxay iftiimisay imaatinkeedii Turkigu in uu ahaa “sababaha ugu waaweyn” sababta ay u noqotay Muslin.
Sababtoo ah bay tidhi waxaan arkay Muslimiin wanaagsan, dad dabeecad wanaagsan leh. Waxay iga dhigeen inaan ka fikiro “waxaan doonayaa inaan noqdo qofkaas oo kale”. Waxa aan dareemay wanaag, way i farxad galisay, waxaan dareemay sidii inaan markale dhashay, waxaan doonay inaan bilaabo nolol cusub, waxaannan doonay inaan iska ilaawo oo aan xaga dambe ka tuuro dambiyadaydii hore ayay tidhi.
Mar ay ka hadlaysay nolosheeda ka hor intayna islaamin, waxay sheegtay in loo tababaray in ay Atirisho noqoto. Waxa kale oo ay xustay inay ahayd riyadeedii waqtiga ugu dheer, waxay sheegtay inay bilawday jilitaanka markay ahayd 14 jir.
“Maddo yar ayaan jilaayay filimada waxaanna lay igu tababaray LA (Los Angeles) waxaan ku noolaa Maraykanka. Taasi waxay ahayd qaab nololeedkayga oo dhan, taasi waxay ahayd riyadayda sanado badan. Waxaan sameeyay qoraalo iyo jiliin, sidoo kalena dhanka isku dubaridka filimada ayaan sameeyay, Bollywood laftooda waan la soo shaqeeyay” ayay tidhi.
Ka dib markay qaadatay diinta Islaamka, waxay ka tagtay riyadaas si ay u sii wado kanaalka ay ku leedahay YouTube-ka oo ay ku soo gudbiso waxyaabaha Islaamka ku saabsan.
“Waxaan rabaa inaan dadka ka caawiyo inay diinta u soo dhawaadaan. Waxaana halkaas ku duubaa sheekooyin badan oo ah sidii diinta loo fahmi lahaa, loona qaadan lahaa. Markaa kor u qaadista waxyaabaha dadka ka caawin doona diintooda waa ujeedkeyga koowaad,” ayay tidhi.
Iyada oo ka hadlaysay barxadda fagaaraha caanka ah ee Istanbul ee Masaajidka Suldaan Axmed (Sultanahmet Squar), ayay tidhi: “Runtii waan jeclahay in aan halkan joogo. Waa goobtii aan ku ogaaday diinta Islaamka. Waanna halkii aan iska helay xaqiiqdii. Waxa uu ahaa dalkii ugu horreeyay ee Muslim ah ee aan abid tago.”
“Waxaan halkan ugu soo laabtay sabab. Waxaan la soo noqday ninkeyga, waxaannan doonayaa inaan tuso meelaha cajiibka ah ee ku yaala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Runtii dadka halkan ku noolina waa kuwo i tacajab galiyay oo soo jiidasho iyo dadnimadu ka buuxdo. Halkani waa meel qurux badan oo nabdoon,” ayay hadalkeeda ku soo xidhay.
Hadda magaceedu waa Caasha (Aisha Rosalie)
Turjumaadda: Mohamed Hassan Xasharo
ber bera news
Previous articleXadhiga siyaasiyintu wuxuu foolxumo ku yahay dalka iyo shuruucda dawladnimada
Next articleAlshabaab oo weeraro ku qaaday saldhigyo ciidan